Dhawunirodha Nguva dzeWindows 10 PC, Desktop & Laptop
1 Download facetime nokuti Windows PC uye Laptop 32bit – 64chidimbu
1.1 Application nokuti Windows:
1.3 Vamwe Coolest Zvinoumba FaceTime
2 Zvinodiwa Kuti FaceTime:
2.0.1 FaceTime inowanikwa:
Download facetime nokuti Windows PC uye Laptop 32bit – 64chidimbu
Dhawunirodha Nguva dzePCHello Facetime Muropa! Kana uri kukuchidzira guru pamusoro facetime Anwendung uye achishandiswa pamusoro iPhone wako uye MacBook ipapo iwe Vanganzwawo Anwendung ichi uri hwindo yori.
Facetime nokuti yori mahwindo 10
Facetime nokuti mahwindo 8
Facetime nokuti mahwindo Laptop
Download Facetime nokuti mahwindo
Download facetime nokuti mahwindo 8.1
Download facetime nokuti mahwindo 7 64 chidimbu
facetime nokuti mahwindo 7 Laptop
facetime nokuti mahwindo 10 cnet
facetime nokuti mahwindo 10 pc
facetime ye windows makomputa
Sezvineiwo unofanira kutevera vamwe mazano kuti Download uye dzishandise Facetime uri Window yori.
Saka Nyaya ino rinopa zvose zvakafanira ruzivo izvo achadzidzisa sei uchigona Download uye dzishandise facetime pane Mapuratifomu asiri eIOS akadai seWindows 7, 8 uye Windows 10.
FaceTime ndeimwe yeakakurumbira Apple vhidhiyo uye odhiyo yekufona maapplication. Kare, vanhu inoshandiswa kuti chokuita mumwe uchibatsirwa chinyakare dzeserura kana handsets asi FaceTime ave zvikuru achinja uyu muitiro. Zvino vanhu vanogona nyore kuita foni, mashoko uye kunyange mavhidhiyo zvinoda achibatsirwa ichi Facetime Anwendung.
Dhawunirodha Nguva dzePCTarisa More App yePC
This allows your phone to get connected to others via a cellular network or Wi-Fi connection. Inoita kuti vanoishandisa kuti risingaperi Video panodana neshamwari dzavo, mhuri uye zvebhizimisi nevanhu munhu akatsigira iPod, iPhone, iPad, Mac kana Windows Via paIndaneti videotelephony.
Anwendung Izvi zvinoshamisa ungaderedza madaro pakati pavanhu uye kuita chaizvo nyore kuramba uchikurukura yako pachako uye nyanzvi upenyu.
pakutanga, Apple yakatanga kushanda nokuda kwayo IOS uye Mac Os namano uye gare gare, nokuda kwayo mukurumbira, zviri kuwanikwa kuti mahwindo uyewo.
Asi kuti Anwendung ichi pamusoro hwindo wako unofanira yechitatu-party chokugadza. Munyaya ino, tichange achiudza stepwise kugadzwa chikumbiro ichi kuti kushandiswa muna mahwindo.
Kana uchida kuziva nezvazvo mberi, ndapota rambai kuverenga nyaya yedu. Tichakurukurawo kuti kugoverana nevamwe anodzidzisa uye zvinofadza Data maererano chikumbiro ichi.
Pakazopera ino, uchakwanisa kunakidzwa chaunofarira Facetime app pamahwindo dzako.
Dhawunirodha Nguva dzePC
Application nokuti Windows:
FaceTime ari ava mumwe coolest vhidhiyo kudana Apps ari paIndaneti mavhidhiyo nvidia uye rwave zvose mamwe vakwikwidzi hofori akafanana Google navaviri, Skype, WhatsApp, IMO, Bingo uye mazita. The Anwendung wakarurama zvakakodzera kupa yepamusoro uye inowirirana rinoonekwa uye zvakarekodhwa zvabuda.
Chimwe kukwikwidzana chinoratidza Anwendung uyu ine rokushandisa-ushamwari inowanikwa. Vamwe dzakapfavirira nhumbi pamusika Software vasingakwanisi kupa kuti bandwidth.
Third-party makambani kusunungurwa Software kuti zvigoneke kuti munhu wese yokugadza Apple nehurumende kushanda musi Windows 7 kana gare gare. ikozvino, zvinoita here kuti FaceTime kubva mahwindo iPhone, mahwindo iPad, mahwindo Mac & mahwindo kumahwindo.
All kuti munoda chinhu inopindirana Internet kubatana uye kushanda kwawo vanotombozvidya mutengo kushandisa pamahwindo.
FaceTime App iri kupfuura zvose videotelephony Software zvatsanangurwa pamusoro. Images vari rakapinza zvikuru uye yakakwirira tsanangudzo mifananidzo vari noukomba kuisa vamwe mikana zvose zvinowanikwa pamusoro paIndaneti pamusika.
Vamwe Coolest Zvinoumba FaceTime
FHD- Full mukuru Definition kutarisana ndiko chezvinonhuwira application.
Iyo inoshamwaridzika mushandisi-interface inoita kuti iwedzere kudyidzana kune vashandisi
Mashandisirwo dzakadururwa nzira unogona batanidza pose uye chero nguva.
Easy kuronga contact list yenyu
Favorite mazita enyu vokukurukura kunokubatsira kusvika muna chete chete watinya
Free kuti mutengo kudanwa imwe ndinoiitawo kutosvika kuramba zvakabatana.
Boka vhidhiyo kufona inoita kuti iwe ubatanidze nevazhinji vashandisi panguva imwe chete.
Mameseji zvakare zvinogoneka application.
Spammers uye hakukoshi vanoshandisa zvinogona kuvanzwa kana kuti kuvharidzirwa kubva pasi.
Users anogona batanidza mano akasiyana kufanana PC, Windows, iPhones, iPad, iPod, Mac.
Zvinodiwa Kuti FaceTime:
Ava uchitorwa mwoyo nomunhurume zvokuti tine chokwadi chokuti vaverengi vedu vachida kuona application. Zvakakosha kunzwisisa zvinodiwa zvinokosha asati nekuisa FaceTime App kuti mahwindo. The zvinodiwa zvinokosha vanosanganisira
Mahwindo Your shanduro anofanira kanenge XP. Nokuti chiitiko nani, tinoda zvinoratidza kuti unofanira kuva mahwindo & kana akazotevera neshanduro.
The CPU havukavu anofanira kuva akakwirira kupfuura 1GHz.
The RAM inofanira kuva mashoma pamusoro 2 GB kana pamusoro.
Panofanira kuva vakatsigira pakuvara kamera nokuti Video kudana kana zvikasadaro kuwana inotakurika vakatsigira kamera kuti chinangwa ichi.
For Audio kudanwa, unofanira kuva maikorofoni. Privacy hanya vanozvishandisa vanofanira kushandisa pamahedhifoni pamwe pakuvara mamaikorofoni.
Chinonyanya kukosha ndechokuti kuva vakadzikama internet connectivity.
Sezvambotaurwa kuti FaceTime chinhu yepamutemo Anwendung pamusoro Apple uye Developers havasati kusunungurwa chero shanduro kuti mahwindo chete.
Saka unogona chete kuwana ichi chikumbiro kubva pamutemo websites muna APK pamanyorerwo inoshandiswa zvose IOS uye Mac namano. Sezvineiwo Windows, tine zvimwe zvirongwa rinowanikwa paIndaneti yokugadza nayo kuburikidza nezvirongwa yechitatu-party.
Regai tikuudzei vaverengi vedu pano danho nedanho kudhanilodha maitirwe ezvinhu pano:
Android emulators yakaburitswa neyechitatu-bato vagadziri kuti vaise akasiyana mafomati. Izvi mafomu Software unokubvumira kumhanya APK urongwa mafaira pamusoro FaceTime pamahwindo dzako. Kana akatogadza kwenyika yako, kungoita nzira. Nokuti Newbies, ndapota, download BLUESTACKS kubva kupiwa batanidzo:
Ndiwo musha Peji www.bluestacks.com
The nzira uye Software zviri zvachose epamutemo saka gara ndokuzorora.
The faira Kukura ndiyo huru approx. 469MB uye kanguva kuti paIndaneti.
Pashure zvinonzi paIndaneti, gadza nayo uye kamwe raitwa, restart mahwindo zvenyu.
Open bluestacks Chikumbiro kubvira pakutanga Muterere. Zvichatora nguva kuti atange wokutanga zvakatipoteredza uye sync default Apps inopiwa papurogiramu. Saka regai kudimburira kwokutanga muitiro.
Kana chirongwa rinotanga, enda Muterere uye tinya kutamba chitoro zvikumbiro.
Mu kutamba chitoro, wana FaceTime vari kutsvaka nzira.
Kopa Anwendung uye tinya "manya"Kuti zvakananga dzishandise application. Unogona zvakare kunze dhanilodhi faira kana uchida kuisa pava paya.
Paunenge wagadzirira dzishandise application kwenyika yako uye kutevedzera mirayiridzo.
Munguva kugadzwa kwacho, unogona rwakakurudzira kuti mutariri kodzero kana mutariri pasiwedhi kana chisimbiso. Ndapota kutaipa runodiwa pasiwedhi kana ruzivo akabvunza.
pakupedzisira, FaceTime akagadzirira kushandisa uri mahwindo.
sika yako mushandisi Id uye pasiwedhi uye ndiye achashandiswa pose zvaungada login.
Pauchapinda kumhanya Anwendung kokutanga, iwe uchava rwakakurudzira kupinda User Id uye pasiwedhi. Sezvo imi kare akasika pachake rakasiyana User ID yako uye pasiwedhi, Richatsvakwa pano kumhanya mberi chirongwa. Kamwe kwokutanga rakasiyana ID kusikwa kwacho kunoitwa, huru inowanikwa achapiwa kuratidzwa.
Vose contactsGoogle vakawedzera, zvakavigwa kana makavhara zvinodzorwa kubva huru inowanikwa. Endai zvaunofarira kuisa kuti gadzirisa nayo pa dzenyu zvinodiwa. Kufanana iPhone, iPad, iPod & Mac, unogona kuridza vakaratidza marongero. Pano iwe haufaniri tenderera chidzitiro iwe asi unogona ukachinja pamwe iripo mikana.
Kana uri kushandisa FaceTime kokutanga uye aida kuziva nezvazvo zvakawanda, unogona kushanyira dzaitsigira Website vamwe hwakadzama ruzivo. Kubatana anopiwa pazasi:
Kudyidzana kwenyika dzepasi rese kwakabatsira vanhu kutenderera pasirese kuti vawedzere kuburitswa uye kufambira mberi. FaceTime haasi pamusoro ichitora doro kana nekomichiyakazara mugovane ngaararame neshamwari dzako uye mhuri chete.
Kwaita massively akabatsira mumusika dzakawanda kugara kwakabatana mumwe.
Apple inongogara kwokusunungura shanduro itsva FaceTime kuti zvabuda nani uye kunyanya Eenhede zvinodiwa rokushandisa.
Dhawunirodha Directv App yePC Windows 10, 8 & 7
KineMaster YePC PC (10, 8, 8.1 & 7) – Free Download
StartIsBack ++ YePC PC 10/8/8.1/7 - Yemahara Kurodha Nyowani Shanduro
Dhawunirodha VPN Master KwePC